घरघरमा तिहार, चोकचोकमा तिहार ‘ह्याप्पी तिहार’ हिन्दुहरुको महान चाड तिहार लागेसँगै सबैतिर रौनक छाएको छ । यमपञ्चक, दिपावली जस्ता नामले परिचित चार्ड फूलहरुको चार्ड हो । काठमाडौंका चोक र घरहरु अहिले फूलले सजिएको छन् । सबैतिर फूलको किनबेच ह्वातै बढेको छ । मानिस आआफ्ना घरको आँगन, दलान, पूजाकोठा, बाल्कानीमा फूल र झिलिमिली बत्तिले सजाउन थालेका छन् । कार्तिक १०, २०७६
राजपा र समाजवादी पार्टीको चुनावी गठबन्धन ! सम्भावना कति ? यता राजपाका महासचिव केशव झाले भने नेपाली कांग्रससँग पनि गठबन्धनको तयारी रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘समाजवादीसँग एकताको कुरा त होलानै सँगसँगै कांग्रेससँग पनि एकताको कुरा बढ्नसक्छ । पहिला कांग्रेले निर्णय गरोस उनीहरुको निर्णय आएपछि मात्र समाजवादीसँग एकता गरेर अगाडि बढ्ने कुरा छ ।’ कार्तिक ७, २०७६
१३ बुँदे माग कार्यान्वयन भए गोरखाले देशको ढुकुटी भर्छ दुई सय चार बर्षका दौरानमा बेलायतले नेपाली युवाहरु जसलाइ ‘गोर्खा’ भनिन्छ – उनीहरुलाई हरेक कुरामा समानता दिन्छौं भनेर बेलायती सेनामा लगेको थियो । तर यति लामो अन्तरालसम्म पनि बेलायत सररकाले समान कामको समान ज्याला दिएको अवस्था थिएन । यसर्थमा गोरखा पनि एक प्रकारले समाज हो । सामाजिक न्याय भन्नाले – यो समाजलाई न्याय चाहिएको छ, अधिकार चाहिएको छ भन्ने हो । कार्तिक ५, २०७६
जनकपुर घटनापछि जिम्मेवारी थपिएको छ : सांसद शाह विभिन्न कारण देखाउँदै एयसलाइन्सले आन्तरिक विमान डिले गराउने परिपाटी नेपालमा नविन होइन् । पछिल्लो समय नेपालमा विमान उडान ढिलाईका कारण विभिन्न प्रकारका घटना बढ्न थालेका छन् । कार्तिक ४, २०७६
‘ढुंगाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल’ विश्वचर्चित फुटबलरका एक हिमायती हुन् – रोमेलु लुकाकू । बेल्जियन काला अल्पसंख्यक परिवारमा जन्मिएका लुकाकू केही समय अगाडि मात्र ‘प्रिमियर लिग’ छोडेर ‘सिरी ए’ प्रवेश गरे । उनी नयाँ लिगमा प्रवेश गरेको समाचार विश्वभर छायो, साथै लिगको दाेस्रो खेलमै उनीमाथि दुर्व्यवहार भएको समाचारले फुटबल फ्यानलाई चस्स घोच्यो । कार्तिक २, २०७६
‘हल्ट प्राइज’ – जलवायु परिवर्तनविरुद्धको आन्दोलन पछिल्लो समय दुई कुराले विश्व तातेको छ । पहिलो – क्लाइमेट चेन्ज । दोस्रो – ‘क्लाइमेट चेन्ज’विरुद्धको शसक्त आवाज । ‘ग्लोबल वार्मिङ’ नामले विश्वमा चर्चा पाएको जलवायू परिवर्तन सम्बन्धि धारणा पछि ‘क्लाइमेट चेन्ज’ नामाकरण गरिएको थियो जसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगातार विरोध गरिरहे । आश्विन १२, २०७६
राजपाको आन्तरिक समस्याले एकीकरणमा ढिलाई – शिवजी यादव राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र समाजवादी पार्टी नेपालबीच एकताको चर्चा अहिले सेलाएको छ । पार्टी एकीकरणबारे मुख्य एजेण्डा बनाएर राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकसमेत बस्यो । राजपाले न एकीकरणको निश्कर्ष निकाल्न सक्यो, न हुदैन भन्न सक्यो । तर दुवै पार्टी एकीकरणका लागि निरन्तर अनौपचारिक छलफलमा छन् । आश्विन १०, २०७६
नेपाली कांग्रेस – भद्रगोल भ्रातृ संगठन कांग्रेस अहिले जागरण अभियानमा छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनावमा पराजित भएपछि थलिएको संगठनमा पुर्नजागरण ल्याउने उद्वेश्यले अभियान सुरु गरिएको हो । तर भातृ संगठनको दयनिय अवस्था र गुटबन्दीले पार्टीमा चाँडै जागरण आउन गाह्रो हुने देखिन्छ । भदौ २६, २०७६
महासचिव हुन चाहिने क्षमता मसँग छ : निलेन्द्रराज श्रेष्ठ निलेन्द्रराज श्रेष्ठ, नेपाल ट्रायथलन संघका अध्यक्ष हुन् । उनी आसन्न नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नयाँ नेतृत्वका लागि हुने निर्वाचनको महासचिवको दाबेदार समेत हुन् । खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र संघको पदाधिकारीको रुपमा उनले आफ्नो जिवन खेलकुदमा बिताए । भदौ १७, २०७६
परिषद् ऐनले चल्ने हो करिब २५ सय नेपाली विद्यार्थी छन्, जसले माईक्रोबायोलोजीमा मास्टर्स गरेका छन् । पढाई पुरा भएपनि उनीहरुले काम भने पाउन सकेका छैनन् । त्यही भएर उनीहरु केही समययता आन्दोलित छन् । भदौ १६, २०७६
कविता : ठूला सपना हो बाबा, मलाई डर लाग्छ ठूला सपना देख्न ठूला सपना देख्ने मान्छे हरुलाई त्यै सपनाले जलाउछ हो ? परदेशमा धन कमाएर जस्ताको छानो हाल्ने तपाईंको ठूलो सपना खायो हैन समुद्रको माछाले ? पढेर ठूली मान्छे बन्ने ठूलो सपना बोकेर एक घण्टा टाढाको स्कुल धाउने ठुल्दिदीलाई निमोठ्यो हैन ब्वाँसोले ? पारी खोल्सामा भदौ ७, २०७६
एनओसी चुनाव : राजनीतिक हस्तक्षेप की आपसी द्वन्द्व ? आगामी भाद्र २० मा नेपाल ओलम्पिक संघ(एनओसी)को चुनाव हुँदैछ । चुनावमा दुई गुटको मुख्य दाबेदारी रहनेछ । ती दुई हुन जीवनराम श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठको गुट । यी दुवै नेकपा निकट पदाधिकारी हुन । भदौ ६, २०७६
‘पढ्न दिने, सर्टिफिकेट दिने तर काम गर्न नदिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ’ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचबिसी)ले एमएस्सी र बिएस्सी माइक्रोबायोलोजीस्टलाई लाईसेन्स नदिएको विषयमा आन्दोलन चलिरहेको छ । मेडिकल, ल्याब, खाद्य तथा गुण नियन्त्रणका साथै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जनसरोकारका क्षेत्रमा अत्यावश्यक माइक्रोबायोलोजिस्टहरुको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागसहित आन्दोलन चलेको हो । भदौ ५, २०७६
देश कसले चलाउँदैछ ? संसद कि सामाजिक सञ्जाल ! यस्ता पोष्ट/ट्वीटहरुले सरकार र जनताको बिचमा दुविधा बढाएको छ । मानिसमा सरकारप्रति जागेको आशा हराउँदै गएको छ । अन्ततः समाजमा नयाँ धारको विकास हुने निश्चित छ । नयाँ धारमा जाँदा मानिसमा धेरै परिवर्तनहरु आवश्यक पर्दछन् । नयाँ धार भनेको राजनीतिक धार होइन यो मानवीय चेतनाको नयाँ बाटो हो । श्रावण २, २०७६